. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: February 2011
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/25/2011 12:46:00 AM7comments:
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို မှတ်မှတ်ရရရှိကြသူတွေကြောင့် မိုးလင်းတည်းက ဗိုလ်ချုပ် ကဗျာတွေ မိန့်ခွန်းတွေကို ကြားနေရပါတယ် .. ကြားဖူးနေတဲ့ ကဗျာတွေထဲကမှ အောက်က ကဗျာလေးကတော့ မိုးခါး မကြားဘူးတဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ .. face book ကနေ ကြားလိုက်ရရာက ကိုယ့်ဘလော့လေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရ အဖြစ်ရော သိမ်းထားချင်တာကြောင့်ရော ဒီကဗျာလေးကို ကူးပြီး တင်လိုက်ပါတယ် .. ဗိုလ်ချုပ်ကို သတိရ အမှတ်ရနေကြတဲ့ သူတွေရော မသိကြတဲ့ မသိကြသေးတဲ့ သူတွေအတွက်ရော အမှတ်တရ ရည်ရွယ်ပါတယ် .. ဗိုလ်ချုပ်သာ ခုချိန်ထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေမယ်ဆို ဒီနေ့ဟာ အသက် ၉၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ..
အာရုဏ်ဦးက ကြယ်နီ ဖြာ
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပါ ..
သူခေါင်းဆောင်လို့ လင်း ..
ဗိုလ်ချုပ် အာဇာနည် ..
ရိုးသား ဖြောင့်မတ် သူ့မူယာ
ငယ်ငယ်တည်းက ပါ ..
ဗိုလ်ချုပ် ဦးအောင်ဆန်း ..
နောက် ကဗျာ တပုဒ်ကတော့ မိုးခါးအတွက် ရင်းနှီးပြီးသား ကဗျာလေးပါ .. အတူတူ ရွတ်ဆိုကြရအောင် ...း)
၁၉၁၅ ရှေ့နေ ဦးဖာ သား
ခုချိန်ထိ ဗိုလ်ချုပ်ကို ဘာလို့ သတိတရ ရှိကြလဲ အမှတ်တရ ရှိကြလဲ ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြရင် ဘာလို့ မျက်ရည်ဝဲကြရလဲ ..
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေ အနစ်နာခံမှုတွေက စစ်မှန်ခဲ့လို့ပါပဲ .. ကျန်ရစ်တဲ့ စကားလုံးတွေမှာ ခံစားလို့ ရနိုင်ပါတယ်လေ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/13/2011 04:22:00 PM3comments:
အကြောင်းအရာခွဲ မျှဝေခြင်း, အမှတ်တရ
မိုးခါး ဘလော့စပေါ့တော့ ၀ဲ ကင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည် .. :P .. ဒေါ့ကွန်းကတော့ မတုန်မလှုပ် ဘလက်လစ်စ်ပါ ..း(
ခုလောလောဆယ်တော့ ဘလော့စပေါ့ပဲ ပြောင်းထားလိုက်ပါတယ် .. :D
လင့်တွေလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ထည့်ပါမယ် .. အားလုံး ၀ဲကူးခြင်းမှ ကင်းပါစေ :P
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/11/2011 02:14:00 PM3comments:
ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် ကြည့်မိတော့ အက်တစ်မဖြစ်တာကြာပြီလို့ ခံစားရပါတယ် .. စာလည်း ရေးဖို့ အစရှာမရသလိုပါပဲ .. စဉ်းစားမိတာတွေလဲ အချိန် နဲနဲကြာရင် ပျောက်ပျောက်သွားပြန်ပါတယ် .. ဒီကြားထဲမှာလည်း ကိုယ့်ဆိုက်က ကြောင်သလား ကိုယ့် mozilla ကပဲ ကြောင်သလား ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြောင်နေသလားမသိ ဆိုက်က Reported Attack Page! ဆိုပြီး စာတမ်းနီကြီး တက်နေပါတယ် ..
ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ စာသိပ်မဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ရုပ်ရှင်တွေတော့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် .. စာအုပ်တွေက ဖတ်ဖို့ ကြွေးတွေ တော်တော်များနေပါတယ် .. ဟိုတ၀က် ဒီတ၀က်တွေလည်း များနေပါတယ် ..
စာမတင်ဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဆိုက်လေး နဲနဲ အက်တစ်ဖြစ်အောင် ခုဖတ်နေ ကြည့်နေတဲ့ စာအုပ်တွေ ရုပ်ရှင်တွေ အကြောင်းပဲ ပြောပါတော့မယ် .. :D
ငယ်ငယ်ကဆို ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ရုပ်ရှင်တွေ တော်တော်ကြိုက်ပါတယ် .. မှတ်မိနေတာတော့ မြိုင်မဟာ မမြလေး ပါပဲ .. ရုပ်ရှင်တွေ ဆိုပေမယ့် သိပ်တော့ မများလှပါဘူး .. ဒါပေမယ့် အရင်က မြန်မာကားတွေ ကြည့်လိုက်ရင် မှတ်မိစရာ အကွက်လေးတွေ ပါတတ်ပါတယ် .. စွဲလဲ စွဲပါတယ် .. ဦးကျော်ဟိန်းကား "အဘရော သောက်သောက်" ဆိုတာမျိုး .. "၁၀နှစ် ၁၀နှစ် သွားသင် .. ဒိုင်း" ဆိုတာမျိုးပေါ့ .. ခုနောက်ပိုင်းကားတွေကျတော့ ကြည့်စရာတွေ များနေပေမယ့် ကြည့်လိုက်ရင် အဆုံးကို ကြိုသိနေတာပဲ များပါတယ် .. အစအဆုံး အချိန်ပေးပြီး လိုက်ကြည့်နေစရာ မလိုတော့သလိုပါပဲ .. မရှိဘူးမဆိုလိုပေမယ့် ရှားတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ် .. တချို့ကားတွေဆို ဇာတ်လမ်းတောင် တိတိပပ မရှိပဲ လူလေး ၄ ၅ ၆ ယောက်နဲ့ တကားပြီးသွားတာမျိုးတွေလည်း ကြည့်ဖူးပါတယ် .. ဆိုးတယ်ပဲ ပြောရမှာပေါ့ .. :D
ဟိုတခါကလည်း အသိအကိုတယောက် ညွှန်းလို့ ရှာကြည့်ဖြစ်ပါတယ် .. သားအဖ ဇာတ်လမ်းပေါ့ .. ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြည့်ဘူးသလိုလို စဉ်းစားမိတော့မှ ဦးကျော်ဟိန်းကား ပြန်ရိုက်ထားတာပဲဆိုတာ သိလာပါတယ် .. ဟိုတခါ အိမ်ထောင်ရေးကား ကလည်း အရင် ဒွေးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကား ဖြစ်နေပါတယ် .. ဟိုတခါလည်း တောက မင်းသားနဲ့ မြို့က မင်းသမီး တွေ့ပြီး ဖူးစာဆုံတဲ့ကားကလည်း အရင် ထွက်ဖူးပြီးသားကြီးပါ .. အဲလိုတွေ ကြည့်ရတာလဲ စိတ်ပျက်လာသလိုပါပဲ .. ဇာတ်လမ်းနဲနဲကောင်းတယ်ညွှန်းလို့ ကြည့်လိုက်ရင် ကားအဟောင်းဖြစ် ဖြစ်နေတတ်တာပါ .. အဲဒီတော့ စဉ်းစားမိပြန်ရော .. သိရဲ့နဲ့ ပြန်ရိုက်တာလား .. မသိပဲ ပြန်ရိုက်တာလား .. သေချာတာတော့ ပြန်ရိုက်တဲ့ကားက အရင်ကားအဟောင်းကို မမှီတာပါပဲ .. ဘယ်လောက် သမားရိုးကျ ကားဖြစ်နေပါစေ မမှီဘူးထင်မိတယ် .. (ကိုယ့်အတွေး သက်သက်ပါ) .. နောက် တချို့ဇာတ်လမ်းတွေ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ကြည့်ရင် ပြန်ပြန်ကြားတာက နိုင်ငံခြားကားတွေကို မြန်မာမှုပြုထားတာတွေ များနေပြန်ပါရော ..
ဒီတော့ စဉ်းစားမိတယ် .. ဘာလို့လဲ .. ဟိုအရင်တုန်းကလို ကိုယ်ပိုင် ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း မရှာနိုင်ကြတော့ဘူးလား ..
နောက်ဆုံးတော့ မစဉ်းစားတော့ပါဘူး .. burmese classic က ခေတ်ဟောင်းကားတွေ ပြန်ဒေါင်း ကြည့်ပြစ်လိုက်တော့တယ် .. :D
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/07/2011 06:19:00 PM3comments: